OMG Industrial Borescope / Endoscope 5.5mm, ihuenyo 4.3inch, 2800mAh Batrị Semi-Rigid Tube (3.5m / 5m) [END015] | Ngwọta OMG
OMG Industrial Borescope / Endoscope 5.5mm, 4.3inch ihuenyo, 2800mAh Batrị Semi-Rigid Tube (3.5m / 5m) [END015]
Ihuenyo 4.3inch: Igwefoto ihuenyo 4.3inch LCD, na-eme ka ikiri vidio dị ndụ na foto ozugbo. Enweghị nrụnye APP achọrọ.
16.5ft tube siri ike tozuru oke iji jide ụdị maka nyocha ọtụtụ.
Igwefoto 5.5mm Slim: Ihe nyocha igwefoto 5.5mm (0.21 inch) na-enyere aka iru ebe echechiri, dịka injin dizel, clogs, injin ụgbọala, sịlịnụ, ọwa mmiri wdg.
Nnukwu Ike Ngbaragbara batrị: Ewuru na batrị lithium nke 2800mAh nke enwere ike ị nweta ike ya, igwefoto nyocha endoscope NIDAGE nwere ike inye awa 3-4 nke oge ọrụ na-aga n'ihu.
Ngwaọrụ Nnyocha Nnyocha: Igwefoto microscope zuru oke maka nyocha havc, paịpụ elektrik, akụrụngwa igwe, injin, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, nyocha ụgbọ elu. Ebumnuche endoscope a abụghị maka nyocha ahụike ma ọ bụ nyocha nkeonwe.
Ngwugwu gụnyere: Igwefoto endoscope nke ulo oru, Micro-USB USB, Akwụkwọ ntuziaka Onye ọrụ, Ngwa nke nko, magnet na enyo akụkụ maka ịtụtụ ma nweta ihu, 4.3inch Endoscope Monitor, 8GB TF Card, Akuku ebu.
Atụmatụ pụrụ iche: Wanaghị anyia / mkpuchi ihu igwe
Nyochaa: Ihu LCD 4.3inch Agba LCD
ngosipụta: 500cd / 
Onyonyo enyo: 1920 × 1080,1280 × 720,
Ntugharị: Ntugharị ọkụ nke 360 °
dayameta: 5.5mm (0.216inch)
Ogo Ogologo: 3.5M / 5M
Nlele ihu: 60 Celsius
Omimi nke Ubi: 3 ~ 10cm
Nzuzo 3573 5 Echiche Taa